Ijaji laseScotland lilahla inselelo yama-nightclub kwiphasiphothi ye-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » IScotland Breaking News » Ijaji laseScotland lilahla inselelo yama-nightclub kwiphasiphothi ye-COVID-19
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Culinary • Amasiko • Ezokuzijabulisa • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Umculo • Izindaba • Abantu • IScotland Breaking News • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
Ngaphansi kwalolu hlelo, izindawo ezithile zaseScotland, kufaka phakathi ama-nightclub, imicimbi engahlali ngaphakathi yabantu abangaphezu kuka-500, imicimbi yangaphandle enabantu abangaphezu kuka-4,000 kanye nanoma yimuphi umcimbi onabantu abangaphezu kwezi-10,000 18, kufanele babheke ukuthi wonke umuntu oneminyaka engaphezu kwengu-19 ugonyelwe i-COVID -XNUMX.
I-Night Time Industries Association, eScotland imangalela ukuvimba uhlelo olusha lwe-COVID-19 lwamaphasipoti wokugoma.
Ijaji laseScotland likhipha isinqumo ngokumelene nabakhongi, lithi uhulumeni angalusebenzisa lolu hlelo ngendlela eyamukelekayo.
I-Night Time Industries Association, eScotland isigxeke lesi sinyathelo ngokuthi "iyabandlulula" ezindaweni ezithile.
Ijaji laseSottish, u-Lord David Burns, namuhla wenqabe inselelo yezomthetho yohlelo lokungena lomgogodla we-COVID-19 oluzayo eScotland, ehlasela icala elethwe yi Inhlangano Yezikhathi Zasebusuku, eScotland ebifuna ukuvimbela ukuthi isilinganiso singaqali ukusebenza.
Esinqumweni sakhe, u-Lord David Burns ukhiphe isinqumo esaphikisana nezicelo zabafaka izicelo zokuthi lolu hlelo "aluhambisani, alunangqondo noma alunangqondo" noma lwephula amalungelo abantu.
Ngokwesinqumo sejaji, lolu hlelo lube ngaphansi kwalokho uhulumeni angakusebenzisa ngendlela eyamukelekile njengempendulo yalolu bhubhane nokuthi "bekuyimizamo yokubhekana nezinkinga ezisemthethweni ezikhonjwe ngendlela elinganiselayo".
Ijaji liphinde lathi uhlelo luzobhekelwa phansi yiphalamende kanye nongqongqoshe, abanomsebenzi osemthethweni wokususa imithetho engasadingeki ukuvikela impilo yomphakathi.
Ummeli WeNdlovukazi (QC) iNkosi uRichard Keen, ummeli omele Inhlangano Yezikhathi Zasebusuku, eScotland, wasigxeka lesi sinyathelo ngokuthi “siyabandlulula” ezindaweni ezithile eziseNkantolo Yesikhathi, wathi “amalungelo ayisisekelo asemthethweni” alabo abafake izicelo kufanele avikelwe.
Ekhulumela uhulumeni waseScotland, u-QC James Mure ugcizelele ukuthi lolu hlelo lwakhiwe ngenkathi iNational Health Service (NHS) inenkinga enkulu ngenxa yalolu bhubhane. Ngokusho kukaMure, lolu hlelo luhlose ukugcina izindawo ezivulelekile ezibeka engcupheni yokudluliswa futhi lukhuthaze abantu ukuthi beze ngaphambili bazogonywa.
Ngaphansi kwesikimu, ngokuqinisekile ScotlandIzindawo okubandakanya kuzo ama-nightclub, imicimbi engahlali ngaphakathi yabantu abangaphezu kuka-500, imicimbi engaphandle enabantu abangaphezu kuka-4,000 kanye nanoma yimuphi umcimbi onabantu abangaphezu kuka-10,000 18 bezidlozi, kumele babheke ukuthi wonke umuntu oneminyaka engaphezu kwengu-19 ubudala ugonyelwe i-COVID-XNUMX.
Uhulumeni waseScotland uthe unikeze osomabhizinisi abathintekayo emasontweni amabili kusukela kusungulwe lolu hlelo, okumele luqale ngoLwesihlanu, "ukuhlola, ukuzivumelanisa nokwakha ukuzethemba ezinhlelweni ezifanele" ezidingekayo ngaphambi kokuba kusebenze ngo-Okthoba 18.
Ngokwezibalo zikahulumeni wase-UK, ama-92% amaScots athole umuthi wokugoma wokuqala we-coronavirus, kanti ngaphezulu kuka-84% aboshwe kabili.
Umsebenzi wokuhlenga iLufthansa e-Afghanistan ususebenze ngokugcwele
Amamaski ayimpoqo abuyela eLondon Underground
Ezokuvakasha Seychelles “INyakatho Melika Yonyaka ...
I-Chinese E-Commerce Giant Yokusetha Izindiza Ezintsha
IMoscow Sheremetyevo Yethiwa Isikhumulo Sezindiza Esigcina Isikhathi Esikhulu Kakhulu e ...
Abasebenzisi Abakhulu Kunabo Bonke Ngenyanga Yokuqala yePhuket ...
I-OTDYKH Leisure Fair 2021 Izobanjelwa eMoscow ...
Ukuqashwa Kweholide eHawaii: Kungcono, kepha Hhayi Lapho
Ukutheleleka kwamanje kwe-COVID eBeach Holiday Izindawo
IBangkok ifuna eyayo iTourism Sandbox
ICyprus ihlubula abokufika abangama-45 i-Golden Visa yabo ...
Abagibeli kuRoyal Caribbean Cruise Egcwele Ngokugcwele ...
Umpetha Wezemfundo Yezokuvakasha: Izindawo Zokuhlalisa Izimbadada ...
Ukuhamba kwe-US: Ukunwetshwa kwegunya le-mask mask kunengqondo
Izindiza ezisuka eToronto naseKingston, eJamaica eSwoop manje
Isidingo sokuhamba sibuyile kepha kusekuncane kakhulu ngaphansi kwe-pre-COVID ...